अटोमोबाइल व्यवसाय उकास्न के-के गर्दैछन् नाडाका अध्यक्ष थापा? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
संस्था गठन भएदेखि घराना व्यवसायीले नेतृत्व गर्दै आएको अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) मा अहिले साना व्यवसायीले नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएको छ।
१७ वर्षको उमेरमा रिकन्डिसन सेन्टरबाट अटोमोबाइल व्यवसाय सुरू गरेका ध्रुव थापा नाडाको अध्यक्ष भएका हुन्।
थापा तीन दशकदेखि अटोमोबाइल्स व्यवसायमा छन्। यसअघि नाडामा उनी दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष थिए।
सन् २०१४ देखि गाडी आयातकर्ताको काम थालेका थापा अहिले फोर्स मोटर्स गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक हुन्।
थापा नाडाको सिन्डिकेट तोड्न कसरी सफल भए? नेतृत्व सम्हालेपछि नाडामा के–के काम भयो?
अटोमोबाइल व्यवसाय उकास्न नाडाको योजना के–के छन् लगायत भावी योजनाबारे नाडाका तत्कालीन अध्यक्ष थापासँग सेतोपाटी संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नाडामा व्यावसायिक घरानाले मात्र नेतृत्व गर्दै आएको थियो। त्यो सिन्डिकेटलाई तपाईंले तोड्नुभयो। कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ?
सर्वप्रथम त नाडामा जिताउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नाडाको चुनाव चुनौतीपूर्ण नै छ। चुनाव लड्ने जित्छु भनेरै हो। जित्छु भन्नेमा म विश्वस्त थिए। मलाई सबै व्यवसायीको साथ थियो, उनीहरूको साथले नै चुनावमा उठ्ने आँट आएको हो।
अहिले हामीले फरक ढंगबाट सबै व्यवसायीको सहानुभूति पाएका छौं, खुसी लागेको छ।
नाडाको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना भयो, यो बीचमा के–के काम गर्नुभयो?
नाडा आफैंले गर्ने त के छ र हामीले सरकारसँगै लबिङ गर्ने हो। कोभिडले अटोमोबाइल व्यवसायमा धेरै समस्या आएको छ। यसको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग छलफलमा जुटेका छौं।
त्यस्तै साना व्यवसायीलाई भन्सारमा निकै समस्या छ उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं। हामी अहिले क्रय क्षमता कम भए पनि सबभन्दा बढी पैसा तिरेर गाडी चढिरहेका छौं।
एउटा मोटरसाइकल चढ्न भारतीयले भन्दा तीन गुणा चर्को तिर्नुपर्छ। हिजो पो सवारी विलासिताको साधन मानिन्थ्यो, अब त आधारभूत भइसक्यो। तर त्यसलाई सरकारले बुझेको छैन। एक तिहाई कर सवारीबाटै उठाउँछ। व्यवसायीलाई अरू केही सहयोग नगरे पनि राजनीतिक स्थिरतासम्म कायम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।
हामी व्यवसायी जहाँ फाइदा देख्छौं, त्यहाँ लगानी गर्छौं। तर सरकारको नीतिले हाम्रो लगानी जोखिममा पर्छ। सरकार अस्थिर छ। आज एउटा नियम, भोलि फेरिइसकेको हुन्छ। यसले लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन।
वर्षैपिच्छे नियम फेरिँदा लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छ। युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा विद्युतीय गाडीको भन्सार दर बढाइयो। अहिलेको सरकारले फेरि घटाएको छ।
भन्सार दर कम भएपछि व्यवसायी केही उत्साहित त भएका छन् तर उनीहरूलाई फेरि नियम बदलिने हो कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले ढुक्क भएर लगानी र व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं।
अर्को, संस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि खोजेका छौं। नाडाको कार्यालय अन्यत्रै सार्ने पनि हाम्रो योजना छ। त्यसका लागि समिति गठन गरेर काम सुरू भइसकेको छ। त्यसको नतिजा केही दिनमै आउँछ।
पुराना नेतृत्वलेभन्दा अटोमोबाइल व्यवसायमा फरक काम गर्न कस्ता योजना बनाउनुभएको छ?
हामी दुवै पक्षको चुनावी एजेन्डा एउटै थियो। जसरी पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने। नेतृत्व फेरिँदैमा काम नै फरक त हुँदैन, शैली फरक गर्ने हो।
विशेषगरी साना व्यवसायीको पहिले नाडाको नेतृत्वसँग पहुँच थिएन। अहिले हामीले साना व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं।
नाडाले हाम्रो कुरा सुनेन भन्ने पहिले केही व्यवसायीको गुनासो थियो, अब त्यस्तो हुँदैन। तपाईंका व्यवसायिक जुनसुकै समस्या छन्, नाडामा आएर राख्नुहोस् हामी सरकार समक्ष पुर्‍याउँछौं भनेर सबै व्यवसायीलाई भनेका छौं।
तपाईंले लामो समयदेखि मोफसल केन्द्र बनाएर व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ। केन्द्रका व्यवसायीसँग कसरी तालमेल मिलाएर अघि बढ्नु हुन्छ?
म मोफसलमा रहेर कामगर्दादेखि नै केन्द्रका व्यवसायीसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध थियो। उनीहरूले मलाई सहयोग गरेका छन्।
म मोफसल व्यवसायी भए पनि त्यो अनुभूति दिलाएको छैन। कर्पोरेट व्यवसायी नेतृत्व हुँदा बरू उनीहरूलाई आफूलाई मात्रै फाइदा हुने काम गर्छन् कि भन्ने डर थियो, अहिले त्यो डर छैन। हामी सबैको लक्ष्य अटोमोबाइल व्यसायलाई फाइदा हुने काम गर्ने हो।
हामीले नाडामा प्रादेशिक संरचनालाई समेटेर लैजाने योजना बनाएका छौं।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ९, २०७८, ०६:०९:००